Microsoft ichasanganisira exFAT rutsigiro muLinux kernel | Linux Vakapindwa muropa
Kwemakore mazhinji Microsoft yaive nehondo isingaperi neLinux, iyo iyo ruvengo rwechikamu chikuru chenharaunda yakawanikwa uye pamusoro pezvese zvakakwana kutsiva. Asi kwemakore akati (kunyanya neshanduko yevashandi veMicrosoft) Izvi zvachinja Huye, mafambiro akati wandei eMicrosoft akatove akaziviswa nekuda kwenzvimbo yakavhurika sosi yenzvimbo uye kunyanya neLinux.
Uye ndizvozvo munguva pfupi yapfuura Microsoft yakazivisa mune rakaburitswa zvinangwa zvekusanganisira iwo maratidziro ehunyanzvi e iyo exFAT faira system y ataura kuda kwake kuchinjisa kodzero dzekushandisa yema patents ese ane chekuita ne exFAT yekushandisa mahara paLinux.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinyorwa zvakaburitswa zvinokwana kugadzira iko kutakurika kuitiswa kweEFFAT inoenderana zvizere neMicrosoft zvigadzirwa. Chinangwa chekutanga chechirongwa ndechekuwedzera exFAT rutsigiro kune kernel yeLinux kernel.
Microsoft ♥ Linux - Isu tinozvitaura zvakanyanya uye isu tinoreva izvozvo! Nhasi tinofara kuzivisa kuti Microsoft iri kutsigira kuwedzerwa kwetekinoroji yeMicrosoft exFAT kuLinux kernel.
exFAT ndiyo faira sisitimu inogadzirwa neMicrosoft iyo inoshandiswa muWindows uye mune akawanda marudzi ezvigadzirwa zvekuchengetedza senge makadhi eSD uye USB flash drives. Ndosaka mazana emamirioni eefFAT-akaumbwa-ekuchengeterwa michina "anongoshanda" kana iwe uchiabatanidza iwo kune yako laptop, kamera, uye mota.
Nhengo dzesangano reOpen Invention Network (OIN), iyo inosanganisira Microsoft, vanobvuma kusaita matare pZvekushandisa kwetekinoroji yayo muzvikamu zve »Linux system.
Asi exFAT haisi pakati pavo, saka tekinoroji iyi haina kuwedzera kuzvisungo zveMicrosoft zvekupa kugona kushandisa patent yayo.
Kune avo vasina kujairana neiyo exFA faira systemUnofanira kuziva izvozvo yakagadzirwa neMicrosoft kugadzirisa kusakwana kweFAT32 cKana ichishandiswa mune yakakura hunyanzvi flash inotyaira.
Tsigiro yeiyo exFAT faira system yakaonekwa muWindows Vista Service Pack 1 uye Windows XP ine Service Pack 2.
Yakakura saizi saizi ichienzaniswa neFAT32 yakawedzerwa kubva ku4GB kusvika pa16 exabytes, kurambidzwa pahukuru hwekuparadzanisa saizi ye32GB yakabviswa kudzikisa kupatsanurwa uye kuwedzera Mahara block bitmap yakaunzwa kumhanyisa, muganho pane huwandu hwemafaira mudhairekitori yakakwidziridzwa kusvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu, zvichipa kugona kuchengeta ACLs.
Iyo exFAT faira system inoshandisa makumi matanhatu nematanhatu kutsanangura saizi yefaira, kubvumira kunyorera kunoenderana nemafaira akakura kwazvo.
Iyo exFAT faira system zvakare inobvumira masumbu kusvika ku32MB, zvinobvumidza kubvumira yakakura kwazvo chengetedzo michina.
Kugadzirisa kutyisidzira kwezvekutaura kwepamutemo, Microsoft inoronga kuve nechokwadi chekuti exFAT mutyairi inosanganisirwa muchinyorwa chinotevera cheiyo Linux system tsananguro.
Nenzira iyi, zvibvumirwa zvine chekuita ne exFAT zvinowira mukati mechibvumirano pakati penhengo dzeOIN.
Zvinokosha kuziva kuti yapfuura patent ye exFAT yaive kiyi yekubatanidza mune dzakawanda zveMicrosoft zvirevo, zvichikanganisa kutanga-kumisikidzwa kweLinux-based mhinduro.
Samsung yakavhura mutyairi neiyo exFAT kuitiswa pasi peGPLv2 rezinesi makore matanhatu apfuura, asi haisati yaverengerwa mune huru Linux kernel nekuda kwenjodzi yekuti Microsoft yakaisa mhosva patent yekutyora
Pachine peji pane webhusaiti yeMicrosoft inoda rezinesi rekushandisa exFAT neruzivo kuti anopfuura makambani zana, kusanganisira makuru maOEM, akapa marezinesi tekinoroji iyi.
Mukuwedzera zvakakosha kusimbisa kuti kufamba uku neMicrosoft Haisi yekuburitsa iyo exFAT kodhi (sezvo vazhinji vachazofunga kuti ichave yakavhurwa sosi) apo isiri. Microsoft iri kungoburitsa chete kodzero dzekushandisa ye exFAT uye kuchengetedza chero chinangwa chekuda kana kudana pamwe nenhengo dzeOIN.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft ichasanganisira exFAT rutsigiro muLinux kernel